Vaovao - TANANA MPAMPIANATRA TANORA AVY AO CHINA!
MPANOMPO AN-TRANO FAMPIANARANA TANY CHINA
Mpamatsy lamba famaohana amoron-dranomasina avy any Shina!
Tato am-parasy ny tora-pasika fasika izao lamba famaohana amoron-dranomasina ary tsy ho voky ny olona. Manomboka amin'ny tenifototra hash amin'ny haino aman-jery sosialy ka hatrany amin'ny bilaogy amin'ny tranokala lamaody, mihodina ireo lamba famaohana ireo ary raha ny marina dia tsy misy mitaraina.
Ary ankehitriny rehefa fantatrao fa mandeha io, dia mety hahatsapa ianao fa manana anjara amin'ny fahafinaretana koa, sa tsy izany? Izany no antony anananay ity bilaogy ity mba hahafantaranao tsara hoe karazana servieta inona avy no tokony hovidinao hahazoana ny lamaody lamba famaohana amin'ity vanim-potoana ity!
Ny printy voninkazo dia ao
Raha ny servieta boribory no resahina, dia misy ny voninkazo. Mety ho ny endrika voninkazo mamelana amin'ny ankapobeny na voninkazo maromaro vita pirinty amin'ny endrika mikoriana maimaimpoana, fa misy vokany eo amoron-dranomasina ireo lamba famaohana ireo. Ny antony? Avo amin'ny loko miabo sy mamiratra, ny lamba famaohana voninkazo dia mampiseho fampiroboroboana ny fihobiana izay asehon'ny fahavaratra ary rehefa aparitanao izany - dia toa fitaovana tsy dia azo antoka loatra ho anao izany.
Ny pirinty Kaleidoscope, fantatra ihany koa amin'ny pirinty fitaratra, dia endrika tsara ho an'ny morontsiraka boribory sy ny lamba famaohana ary olona maro no mitady izany amin'ny loko mitambatra. Tsy ny volon'ny doodle fitaratra mainty sy fotsy ihany, fa ny loko toa ny mavo, manga, ary ny hafa ihany koa no miditra amin'ny fifangaroana - izay fambara tsara ho an'ny fitaovana amoron-dranomasina. Raha ny marina, raha tianao dia azonao atao ny mampifanohitra an'ity fanontana ity amin'ny lambanao amoron-dranomasina ary mandry eo amboniny miaraka amin'ny zava-pisotro eo anilany - izay sary namboarina tamin'ny haino aman-jery sosialy tsy misy fangarony.
Servisy boribory voankazo
Ny fahavaratra dia miresaka momba ny voankazo tropikaly ary rehefa azonao atao pirinty tsy tambo isaina amin'ny lamba famaohana amoron-dranomasina dia eo am-pitoerana ny fomba. Mora ny mahita azy miaraka amin'i Sina mpamatsy lamba famaohana amoron-dranomasina ary ahitanao azy ny karazana voankazo fahavaratra - maniry manga na mananasy, frezy mena, pasteky, na kiwi? Na inona na inona voankazo tianao indrindra dia ho hitanao amin'ireo servieta voankazo ireo. Makà iray izao raha hijery ny torapasika izao!
Milalaova lamba famaohana baolina
Ny servieta boribory dia manana haitraitra azo vita pirinty amin'ny volavola baolina ary zavatra mahafinaritra izany amin'ny vanim-potoanan'ny baolina kitra. Ataovy pirinty azy manokana toy ny telstar 2018, na mandehana amin'ny fanaovana pirinty baseball sy basikety - na inona izany na inona, dia hanome anao ny fiovan'ny fanatanjahan-tena farany izany. Handeha lalao volley any amoron-dranomasina? Fantatrao izao izay ho famolavolana loha famadihana ho an'ny lamba famaohana amoron-dranomasina amin'ity vanim-potoana ity.
Quote lamba famaohana
Te-hahatsiaro tena ho vorona afaka? Andramo ilay tsangambato faribolana mahavariana ambongadiny lamba famaohana! Betsaka ny teny manentana azonao ampiasaina, ary azonao atao izany amin'ny sarimihetsika tianao, boky, na amin'ny toerana hafa mety namakianao azy. Ny lamba famaohana dia misy loko maro ihany koa ary azonao atao ny manandrana ny lokon'ny endriny volomparasy sy ny lokon'ny manga, satria ireo koa no loko mazàna amin'ny vanim-potoana.
Ny printy lamba famaohana Artsy
Ny Circle no endrika feno indrindra ary ny towels artsy dia manome lohateny lehibe amin'ny bilaogin'ny magazine fashion rehefa ampiarahina amin'ity endrika ity. Ireo fanontana ireo dia misy pitsiny sarotra ary izany no mahaliana ny mpanjifa azy ireo. Andramo ny loko isan-karazany mba hahitana karazana isan-karazany ao amin'ny fitafianao lamba famaohana ho an'ny vanim-potoana.
Ireto ny laharana 6 ambony ho an'ny lamba famaohana amoron-dranomasina amin'ity vanim-potoana ity ary raha te haka iray ho anao ianao dia tokony haka amin'ny iray amin'ireo fironana ireo - mba ho lamaody eo amoron-dranomasina ianao. Hamarino tsara fa mifanentana tsara amin'ny lamba fidianao ny lamba famaohana boriboryo, ary avy eo dia ho kintana sarimihetsika toy ny lohan-doha eo amoron-dranomasina ianao. Hatramin'izao, mandehana fotsiny mba hahafahanao mahazo ny tànanao amin'ireo volavola tianao indrindra faran'izay haingana!
Andinina amoron-dranomasina vita amin'ny Pure Microfiber, Sariitatra lamba famaohana amoron-dranomasina, Lamba famaohana vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy, Pyjamas amin'ny haran-dranomasina, Tape Beach Bag, Lamba famaohana vita pirinty Disney,